IConversica: Ukuxhumana, Ukubandakanya, Ukukhulisa nokuQiniseka usebenzisa umsizi we-AI | Martech Zone
I-Conversica: Xhumana, Zibandakanye, Unakekele futhi Ufanele Ukusebenzisa Umsizi we-AI
Lwesibili, Disemba 12, 2017 NgoLwesihlanu, ngoDisemba 15, i-2017 Douglas Karr
IConversica inikeza i umsizi wokuthengisa ozenzakalelayo inikwa amandla yisoftware yokufakelwa. Umsizi usebenza njengomsizi wokuthengisa wabantu, ukufinyelela kuwo wonke umkhondo wakho ngamunye nokubandakanya ngamunye wabo engxoxweni yabantu. Abantu bayayithanda ngoba umsizi uyabukeka, unobungane futhi uyaphendula, ubaxhume ngokushesha nomuntu ongasiza.
Sisentwasahlobo ye-AI. Ngicabanga ukuthi kuyo yonke inkampani, inguquko kwisayensi yedatha izoshintsha ngokuyisisekelo ukuthi siqhuba kanjani ibhizinisi lethu ngoba sizoba namakhompyutha asisizayo ukuthi sisebenzisana kanjani namakhasimende ethu. Isikhulu esiphezulu seSalesforce uMarc Benioff
Oxhumana nabo abasizayo futhi bafanelekela yonke imikhondo ukuze abathengisi bakwazi ukugxila ekuthengiseni kunokukhulisa. Le automation inika amandla ukuhola ngakunye okufanele kulandelwe futhi kutholakale impendulo yesikhathi sangempela.
Usebenza Kanjani Ummeleli Wokuthengisa we-AI:
Umsizi wakho wokuthengisa ozenzakalelayo ifaka ikhasimende ngokushesha lapho kufika umholi. Ngokwesilinganiso, ama-35% wabo bonke abahola baphendula kumsizi wokuthengisa ozenzakalelayo. Umsizi wokuthengisa ozenzakalelayo ama-imeyili emuva naphambili ngokuhola, ukondla ngamunye ngamunye futhi uxwayise abasebenzi bakho bokuthengisa lapho inzalo iguqukela enhlosweni yokuthenga.
Umsizi wakho wokuthengisa ozenzakalelayo thola okuholela ukufuna ucingo futhi uthola inombolo ehamba phambili. Nge yabo isoftware yokufakelwa umsizi wakho wokuthengisa ngokuzenzakalela ukhomba imikhondo ekulungele ukubamba iqhaza kwinqubo yokuthengisa futhi uthola inombolo yocingo engcono kakhulu nesikhathi esihle somthengisi ongashayela kuso. Ngokwesilinganiso, amaphesenti angama-35 emikhombandlela ahlinzeka umsizi wokuthengisa ozenzakalelayo ngenombolo yocingo eyengeziwe, imvamisa iselula. Okubaluleke kakhulu, lapho abasebenzi bakho bokuthengisa bebiza, abaholayo bazobe belindele ucingo lwabo.
Umsizi wakho wokuthengisa ozenzakalelayo zibandakanya ukuhola okudala nokuthengisa okuphambene. Umsizi wakho wokuthengisa ozenzakalelayo angathola namathuba amasha okuthengisa kumikhondo emidala, ukukhuphula ukuthengisa nokuthola inani elingaphezulu kusuka kumikhombandlela yakho ekhona. Cishe ama-60% okuhola kabusha kobuchwepheshe be-AI yeConversica asesemakethe. Umsizi wakho we-AI ongasetshenziswa futhi angasetshenziselwa ukuthengisa eminye imikhiqizo nokuqoqa impendulo ekwanelisekeni kwamakhasimende.
Lungiselela ukuzenzakalela kokumaketha kweCRM izixazululo. Umsizi wakho wokuthengisa ozenzakalelayo angasetshenziselwa ukuthuthukisa ikhwalithi yemikhombandlela futhi akhombe kangcono amathuba okuthengisa kusuka kumikhombandlela adalwe yimikhankaso yokukhiqizwa kwesidingo ngamathuluzi wokuzenzakalela wokumaketha afana nePardot, Marketo noma i-Eloqua.
Izinzuzo zommeleli Wokuthengisa ophethwe yi-AI zifaka:
Khulula ukubuyela kwakho ekuthengiseni kwangempela - Umsizi wokuthengisa ozenzakalelayo wehlukanisa imikhondo emihle kwabafile, ngakho-ke abathengisi abathengisayo bakhuluma kuphela namathemba afuna ukukhuluma nabo.
Landela konke ukuhola okukodwa - IConversica ithela okuningi kakhulu kumalulwane kubathengisi bakho bokuthengisa - ngemikhombandlela emisha nemidala - futhi ngaleyo ndlela kukhulisa kakhulu inani labo lamadili avaliwe.
Thola impendulo ethembekile - Umsizi wakho uyangeneka, ukuthi amathemba akhululeke kakhulu futhi athembekile ekuphenduleni kwawo kunokuba abe ne-a umthengisi.
Hlanganisa ubuhlakani bebhizinisi obubucayi - Amathemba awagcini ngokuphendula kalula, abuye abelane ngolwazi olubucayi njengezinombolo zocingo, izikhathi ezingcono kakhulu zokushayela, kanye nenhloso yokuthenga.
Thuthukisa inqubo yakho yokuthengisa - Umsizi wakho wokuthengisa ulandela namathemba futhi ngemuva kokudlulisela kumthengisi - ukuletha ukuqonda kwabaphathi nokweneliseka kwamakhasimende.
Sebenzisa umsizi wokuthengisa oqeqeshwe ngokuphelele - Umsizi wakho wokuthengisa ufika eqeqeshwe ngokuphelele, ekhuthazeke ngokuphelele, futhi esevele efakwe ulwazi olutholwe ezigidini zezingxoxo zamakhasimende.
Zama i-Conversica Mahhala Bona i-Live Conversica Demo
Tags: aiumsizi we-aiumsizi we-aiumsizi we-ai virtual salesukuhlakanipha okungekhona okwangempelaingxoxodashboardeloquaumabhebhanaushweleumsizi oqondileumsizi wokuthengisa obonakalayoiqembu lokuthengisa elibonakalayo